जर्ज प्रिन्सको 'सरप्राइज' सेलिब्रेसन - Khelpati
शुक्रवार, पुष २५, २०७६ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । नेपाली फुटबलकै माथिल्लो श्रेणीको 'ए' डिभिजन लिगमा शतक गोलको संघारमा रहेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व स्ट्राइकर सन्तोष शाहुखलको गोलपछिको सेलेब्रेसन कस्तो होला ? सबैमा कौतुहलको विषय बनेको थियो ।
'ए' डिभिजन लिगको ४३ औं संस्करण आईपुग्दा बुधबार सन्तोषले १०० लिग गोल गर्दै ऐतिहासिक सफलता हात पारे । च्यासल युथ क्लबबाट खेलिरहेका सन्तोषले नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध गोल गर्दै शतक गोलको कोशेढुंगा पार गरे ।
सन्तोषले कीर्तिमानी गोल गर्दा अपेक्षाकृत सेलिब्रेसन गरेनन् । उनको गोल सेलिब्रेसन सामान्य थियो ।
तर, नेपाली लिगमा सन्तोषले कीर्तिमानी गोल गरेको भोलिपल्ट (बिहीबार) भने गज्जबको गोल सेलिब्रेसन देखियो । जुन सेलिब्रेसन जारी लिगकै फरक र नौलो थियो ।
त्रिभुवन आर्मी क्लबका स्ट्राइकर तथा जर्ज प्रिन्स कार्कीले सरस्वतीविरुद्ध गोल गरेपछि फरक किसिमको गोल सेलिब्रेसन गरे ।
खेलको ३० औं मिनेटमा दिनेश हेम्जनको पासमा गोल गरेपछि जर्ज प्रिन्सले आफ्नो जर्सीको भित्री कपडा देखाए । जसमा उनले खेलेका थिए - ‘प्राउड गनर आर्मी फरेवर’ । यस्तै छेउमा ५५ र ६४ अंक लेखिएको थियो ।
नियमित कप्तान भरत खवास लिगामेन्टको समस्याका कारण १३ औं मिनेटमै मैदानबाट बाहिरिएपछि टिमको नेतृत्व जर्ज प्रिन्सले पाएका थिए । उनकै एक मात्र निर्णायक गोलले आर्मीले जित निकालेको थियो । जितसँगै आर्मी लिगको शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको थियो ।
‘यो मेरो सबैलाई सरप्राइज सेलेब्रेसन थियो,’ खेलपछि जर्ज प्रिन्सले छोटो प्रतिक्रिया दिए ।
आर्मीको जितमा निर्णायक गोल गरेका जर्ज प्रिन्सले किन फरक गोल सेलिब्रेसन गरे ? उनले आफ्नै टिमका सहकर्मी र टिम अफिसियललाई पनि जानकारी गराएका थिएनन् ।
बिस ७२ सालबाट आर्मीका जागिरे जर्ज प्रिन्सले आर्मीले आफुलाई खेलाडी बनाएको र खेलका लागि सधै समर्थन गरेका कारण यस प्रकारको सेलिब्रेसन गरेको बताए ।
‘आर्मीले मलाई खेलाडी बनायो । खेल्नको लागि सधै समर्थन गर्यो । त्यसैले पनि आर्मीको लागि यस्तो सेलिब्रेसन गरे,’ खेलपाटीसँग कुरा गर्दै जर्ज प्रिन्सले भने, ‘आर्मीमा विभिन्न कार्यक्रम हुँन्छ । मलाई अन्त पनि पठाउन सक्थ्यो । तर खेलमानै लाग्नुपर्छ भनेर पठाएको छ । त्यसैले आर्मीको नाममा सेलिब्रेसन गर्ने निर्णय गरेको थिए । त्यो आज सम्भव भयो ।’
राष्ट्रिय टिममा सदस्य समेत रहेका जर्ज प्रिन्सले यस सेलिब्रेसनबारे आफुले टिमका साथी, परिवार कसैलाई पनि जानकारी नदिएको बताए ।
जर्ज प्रिन्सले सेलिब्रेसनका लागि टी-सर्टमा आफैले लेखेका थिए । त्यो पनि मध्ये रातमा लेखेका थिए । किनकी प्रिन्स यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहदैन थिए । त्यसमा प्रिन्स सफल भए ।
यस सिजनको लिगमा प्रिन्सको यो पहिलो गोल समेत हो । प्रिन्सले पाँचौ खेलमा आएर पहिलो गोल गरे ।
जर्ज प्रिन्सले यसअघिका चार खेलमै गोलको फरक सेलिब्रेसन गर्ने योजना बनाएका थिए । लिगमा गोल नै गर्न असफल भईरहदा जर्ज प्रिन्स पछि हटेका थिए । तर, सरस्वतीसँगको खेलमा भने उनलाई समय जुर्यो ।
‘सेलेब्रेसन गर्छु त भन्ने थियो । यस खेललाईनै भनेर सोच बनाएको थिईन । तर, राता रात बनाए । र, सरस्वतीसँगको खेलमा लगाए । संयोग जुन दिन लगाए त्यहि दिन गोल निस्कियो,’ प्रिन्सले भने ।
फुटबलमा जर्ज प्रिन्सले गरेको सेलिब्रेसन फिफाको नियम विपरित मानिन्छ । फिफाले कुनै पनि नारा, राजनीतिक, धर्म, जाति, वर्ण र कम्पनीसँग सम्बन्धित नारा देखाउन नपाउने नियम लगाएको छ ।
त्यसैले गोल सेलिब्रेसन गरे लगत्तै उनले लगाएको भित्री कपडा निकाल्नु पर्याे । गोल लगत्तै उनलाई फोर्थ अफिसियलले बाहिर निकालेर जर्सी खोल्न लगाएका थिए ।
५५ र ६४ अंक के हो ?
दोस्रो सिजनको लिग खेलिरहेका जर्स प्रिन्स बिस २०७२ सालमा आर्मीमा भर्ना भए । तर, गोल सेलिब्रेसनमा ५५ र ६४ अंक थियो । र, यसको पनि अर्थ छ ।
आर्मीमा जर्ज प्रिन्स राजदल अन्तर्गत गनर गढका सैनिक हुन् । उनको सुरुवाती सैन्य तालिमको ब्याज ५५ रह्यो । यस्तै उनले केहि महिना अघि नगरकोटमा सैन्य कमान्डो तालिम गरेका थिए । जुन तालिममा उनको ब्याज ६४ रहेको थियो ।
त्यसैले बिहीबार आफ्नो गढ र तालिमको ब्याजको लागि उनले - ‘प्राउड गनर आर्मी फरेवर ५५, ६४’ लेखेका हुन् ।
बंगलादेशमा ६ महिना ‘गनरी कोर्ष’ पुरा गरेर केहि समय अघि मात्रै जर्ज प्रिन्स नेपाल आएका हुन् । दुई महिना पछि जर्ज प्रिन्स सह सेनानी पदमा बढुवा हुँदैछन् । अहिले जर्ज उप सेनानी हुन् ।
जर्ज प्रिन्सले राष्ट्रिय टिमबाट ३ क्याप जितिसकेका छन् । उनले राष्ट्रिय टिमका लागि एसियन कप छनोट अन्तर्गत फिलिपिन्ससँग होम एण्ड अवे र यमनसँगको खेल खेलेका थिए ।